中文 IsiRashiya Español
Hydraulic Isivundisi Turner
Disc umanyolo Granulator
bokushicilela Drum Dryer
Belt swa System yinxalenye sele kumgca imveliso isichumiso yonke. Sinikeza abathengi kunye yokuthutha ibhanti liyayithanda eliphezulu ukutyekela-engile ibhanti yokuthutha. I swa uthambekele inxibelelanisa kunye izixhobo ephambili isichumiso, okwenza lula izinto ekrwada & bagqiba iimveliso zokuhamba. Le nkcazelo yokuphatha zokuthutha ezisetyenziswa kwizicelo uyithobele kunye ukuhla ukuvumela nezichumiso ukuba eziyintlanganisela ngelixa ehamba phakathi imigangatho okanye yokuthutha eDibanisa. Oku konga umsebenzi, ixesha namandla, kunye nabalinganiswa ngokobuchule ophezulu & operation lula. swa uthambekele lisetyenziswa kuphela kwimveliso umanyolo eziphilayo ezimbaxa &, kodwa umthi & feed iingqalutye umgca wemveliso, leyo adjustable ngokungqinelana neemfuno zabaxumi. Le nto akhutshelwa hopper le swa. Le hopper ekudleni iye iipleyiti zerabha-wokuvala ukunciphisa ilahleko eziphathekayo. Xa bubudala, la macwecwe ngokulula zisuswe. Ibhanti swa uthambekele bakhiwe of zinqunqwe insimbi. Isakhelo ikhona amacandelo ukuba walutshixa kunye. Ibhanti conveyer luthengiswa kushushu.
Previous: Umanyolo Packaging Machine
Belt Ububanzi (mm) Belt Ubude (m) / Power (kW) Belt Speed ​​(m / s) Isikhundla (t / h)
Qaphela: power ngqo ziza kugqitywa yi isethi epheleleyo
1. Uyilo Icwecwe, efanelekileyo wokudla, umgubo okanye isichumiso iimveliso.
Belt swa ubunjwe izileyi nebhanti yokuthutha ezivaliweyo. Kukho nosaziwayo ezimbini mnye kuba yokuthutha ojikelezayo omnye idriving ukuba ukutshintsha indlela lwemoto of swa. mqengqeleki iintloko drived yi motor yokuthutha into draged umxwile ungquzulwano apho wenziwa mqengqeleki intloko swa. mqengqeleki iNtloko ivame ekugqibeleni nokudubula ukwandisa imoto ukuba erhola engcono. Material sidla ukusuka ekupheleni feed kwaye iwela batshintshana ibhanti yokuthutha lilahle ekupheleni delivery yokuthutha yi.
Umanyolo Packaging Machine